ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 76
Hla Than – ကဗျာဆရာ လှသန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၆လပြည့် အမှတ်တရပွဲကျင်းပ
ကဗျာဆရာ လှသန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၆လပြည့် အမှတ်တရပွဲကျင်းပ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ( ၂၇ ဧပြီ၊ ၂၀၁၂ ) ၊ ညနေ ၆ နာရီက ကဗျာဆရာလှသန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ လ ပြည့် အခန်းအနားကို စမ်းချောင်းအိုးဘိုလမ်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျင်းပရာ မိတ်ဆွေ ရေးဖေါ်ရေးဖက် ကဗျာဆရာများတက်ရောက်ကြသည်။ ကဗျာဆရာလှသန်းသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထုတ် ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖြောင့်ချက် ကဗျာ၊ ၁၉၉၈ သြဂုတ်လ ထုတ် ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်းတွင် လက် ကဗျာ၊ ၁၉၉၉ ဇူလိုင်လ ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်းတွင် အနေအထိုင်မတတ်သူများ ကဗျာ ၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာ ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် တောင်အမေရိက...
ဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၄ရက်နေ့ နေ့လည် ၁နာရီ၊ အိုရီယမ်တယ်ဟောက်စ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူ မိဘပြည်သူများအား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား မှတ်တမ်းပုံများ…။(အချက်အလက် နှင့် ဓာတ်ပုံများ – CJMyanmar http://www.facebook.com/CJMyanmar) ပန်တျာဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်အား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်…။ ပန်းချီကားလက်ဆောင်… ရွာစား သန်းဌေးမောင်နှင့် မန္တလေးမှ အတီးပညာရှင်များ…။ No tags for this post. Related posts No related posts.
(ဓာတ်ပုံသတင်း) ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧပြီ ၁၄ – ၁၅ ရက်နေ့တွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကဲင်တပ်ကီပြည်နယ်၊ ဘိုလိင်းဂရင်းမြို့၊ အမှတ် ၁၀၄၄ ဂါမင်းလမ်းသွယ်ရှိ၊ ဝေဠုမြိုင်တောရကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးစံပယ်တော်မူနေတဲ့ စိန္တာမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ဘုရားပွဲတော်ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဝေဠုမြိုင် ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသနှင့် မြန်မာပြည်တိုင်းရင်းသားများ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းတို့က ဦးစီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီမှာ ဝေဠုမြိုင် ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ကြွရောက်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစုတွေက စိန္တာမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကို ပန်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ သစ်သီး စတဲ့လှူဖွယ်ပစ္စည်းများနဲ့ ဆက်ကပ်ပူဇော်ကြပါတယ်။ ကြွရောက်လာတဲ့ ဧည့်ပရိတ်သတ်များကို အလှူရှင်များက အုံးနို့ခေါက်ဆွဲ၊ အချိုရည်၊ ရေ...
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ဆင်ဆာတင်ရန် သတိပေးခံရ –awarning letter from censorship board
ဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဆင်ဆာဌာနက အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအား ထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ရန်၊ စာမူများကို ဆင်ဆာအဖြတ်ခံပြီးမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် သတိပေးသော အကြောင်းကြားစာသည် Facebook စာမျက်နှာသို့ ယနေ့ ရောက်ရှိလာသည်။ အကြောင်းကြားစာ – http://2.bp.blogspot.com/-Q-CAnlQDSnw/T5L4hYX4ExI/AAAAAAAAWFo/6x8nCnSws8A/s1600/021.jpg No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခ (ဓာတ်ပုံသတင်း) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၃ မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ မဟာချိုင်၊ ၀ပ်ခေါင်မဒေးရာကျောင်းတွင် (၁၀) ကြိမ်မြောက် ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံ ရှင်ပြု သီလရှင် ၀တ်ပွဲနှင့် ၀ိပသနာတရားစခန်းပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံသားတိုင်ရင်းသား ၂၀၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒုလ္လဘ ၁၀၀ သီလရှင် ၅၀ နှင့် ယောဂီ ၃၀၀ ကျော် ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာ့ရိုးရာရှင်လောင်းလှည့်ပွဲနှင့်အတူ ထိုင်းယဉ်ကျေးမှု စုံကန်ရေသွန်းပွဲများကိုလည်း တပျော် တပါးဆင်နွှဲကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၂NLD က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဖြစ်သော ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ် တွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံများ – NLD) No tags for this post. Related posts No related posts.
နယူးယောက်ပြည်၊ ယူတီကာ သန္တိသုခသင်္ကြန် စည်ကား မြင့်မိုရ်ဦး၊ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ယူတီကာမြို့ ၊သန္တိသုခကျောင်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော (၉) မြောက် အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ က စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ မနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် “နမောတဿ” သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်အား ရေသပ္ပါယ်ခြင်း၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ အားဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခြင်း စသော နှစ်သစ်ကူး ကောင်းမှုမင်္ဂလာများ ပြုကြပါသည်။ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်ပညာနန္ဒထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြပြီး ပရိတ်တရားတော်များ နာကြားခြင်း၊ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေကြောင်း စုပေါင်းမေတ္တာပို့ သခြင်းနှင့် လှူဘွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကို လှူဒါန်းကြပြီး...
သင်္ကြန်မှာ ရေပက်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – Daw Suu and water festival
ဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်တွင် ရေပက်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံများ – http://www.facebook.com/saw.hlaing ) No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ “သင်္ကြန်အကြိုနေ့ က တွေ့ ရသော ကိုမင်းကိုနိုင်” ဟု Burma VJ Media Network က Facebook တွင် ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံကို စာဖတ်သူအများအပြားက နှစ်သက်နေကြသည်။ အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်များ ပေးထားကြသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
Co Thagyan – ကော်လိုရာဒိုက မိုးသောက်ပန်းသင်္ကြန်မြင်ကွင်း
ကော်လိုရာဒိုက မိုးသောက်ပန်းသင်္ကြန်မြင်ကွင်း ကော်လိုရာဒိုမြန်မာကွန်မြူနီတီဘလောက်က ကူးယူပါတယ်၊ ဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၇ ရက်နေ့က ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စုပေါင်းပြီး ၁၀ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ကို ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် အော်ရိုရာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပွဲသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ပရိသတ် ၃၀၀ နီးပါး ပျော်ရွှင်စွာ လာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်အက၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာအကတွေအပြင် ခေတ်ပေါ်တေးဂီတတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့လည်ကနေ ညနေပိုင်းအထိကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီပွဲတော်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာတွေအပြင် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့...